Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya Melbourn oo u furtay tababaro ururada bulshada
Jaaliyada Ogadeniya Melbourn oo u furtay tababaro ururada bulshada
Hoos ka daawo Sawiraanta;
Maanta oo bishu tahay 21 October 2012 waxeey Jaaliyada Soomaalida Ogadeniya waxay u soqabanqaabisay ururyada bulshada Jaaliyada sida Ururka hawaanka,ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda (OYSU Melbourne) tababar ku saabsaan hoggaan nimada oo socondoona mudo dhan bil ( Leadership Training). Waxaa kaloo ka soqeybgalay tababarkaan ururka Odayaasha ee Victoria.
Waxaa lagu furay tababarkan aayadaha Qur’aanka, kadibna Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria Halgame Hikim Sheikh ayaa uga mahadceliyeey dhamaan Jaaliyada iyo ururada bulshada sida wanaagsan ee ay uga qeybqaateen tababarkaan.
Sidaan horay u sheegnay wuxuu tababarkaan socondoona mudo bil gaaraysa, Gudoomiyaha iyo gudiga lashaqeeya ayaa run’ahaantii xooga saaray inay tababaro u furaan dhamaan Xubnaha Jaaliyada, taageerayaasha iyo dhamaan ururka haweenka iyo OYSU Melbourne.
Tababarkaan baa waxaa daadihinayey Martaioo kasocotay Brotherhood of Saint Laurance. Tababarkaan wajigiisa hore wuxuu socday Muda gaareysaa 4 saac oo dhamaan xubnaha ka sooqeybgalay ay ka muuqatay xiiso. Waxeey fursad u heleen dadka ka soqeybgalay tababarkan ee luuqada engeriiska fahmin ama ku hadlin in looturjimo casharada socday.
Halgame Hassan Nuur oo ah Gudoomiya kuxigeenka Jaaliyada iyo Halgame Ahmed Khalif ayaa daadihinayeey qeybta turjimida. Casharada ayaa ka mid ahaa kuwo lagu qaadanaya maamulka wanaagsan- waamaxay Hogaamiye? yaa Hogaamiye noqonkara?
Tababarkaan ayaa waxuu ka mid yahay waxyaalaha Gudoomiyaha Jaaliyada iyo gudigiisa ay rabaan in ay uga faaideyaan dhamaan xubnaha jaaliyada iyo taageerayaashaba. Bishii lasoodhafaay ayaa gudiga jaaliyada eey soodiyaariyeen casharo lagu barayo xubnaha jaaliyada iyo tageerasha sida gaariga loowado. Ayagoo soodoortay dad dhan 20 qof oo rag iyo dumar iskugu jira oo labarayo wadida gawaadhida iyo sharciyada jidadka.
Waa fursad aad u qiimo badan iyo guul u soohoyaday dhamaan jaaliyada Soomaalida Ogadenia eyna ka faaiidaysan doonaan.
Gabagabadii tababarka ayaa waxaa la’isdhaafsaday fikrado iyo su’alo ku saabsan waxeey barteen dhamaan. Tababarkaan ayaa ku dhamaaday si farxad ah, qeybtiisa labaadna ey bilaabandoonto 11 November.